Axmed Madoobe oo kulan gaar ah la yeeshay guddiga doorashada Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Axmed Madoobe oo kulan gaar ah la yeeshay guddiga doorashada Jubbaland
Tuuryare 13 July 2021
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose kulan kula qaatay Guddiga maamulaya Doorashooyinka ka dhacaya Jubbaland.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa Guddiga doorashooyinka Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee deegaanada Jubbaland ku booriyay in ay howsha doorashada u maamulaan si hufan oo caddaalad iyo daahfurnaan leh.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa Guddiga uu la kulmay u sheegay in muhiim ay tahay in doorashada labada Aqal ee ka dhacaya Magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey ku dhacaan, si hufan oo caddaalad iyo daahfurnaan leh.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada Siyaad Maxamed Mursal oo kulanka ka hadlay ayaa Madaxweyne Axmed Madoobe uga mahadceliyay dadaalka uu wado ee ku aadan doorashada iyo boggaadinta uu u jeedinta xubnaha Guddigooda.
Dhawaan ayey markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in Axmed Madoobe uu kula xisaabtami doono doorashooyinka ka dhacaya Jubbaland, isla markaana Maamulka doorashadaas hoos geeyay Madaxweynaha.
Jubbaland oo go’aanno adag ka soo saartay arrimaha amnigeeda
Ra’isul Wasaare Rooble oo la kulmay Guddiga amniga doorashooyinka